MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA SEPPALA SIBERIAN SLEDDOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Seppala Siberian Sleddog
Lahaanshaha sawirka Seppala Kennels, Rossburn, Manitoba
In kasta oo Seppala ay ahaan jirtay isku nooc sida Siberia Husky maanta, haddana waxaa loo arkaa nooc gaar ah oo muuqaal ahaan ku kala duwan. Seppalas waa khadadka shaqada iyo Siberia Huskies waa khadadka bandhiga. Lugahooda iyo jidhkoodu way ka dhaadheer yihiin guud ahaanna way ka fudud yihiin culeyskooda waana ay ka dhisnaan badan yihiin eyda showga ah. Dhegaha ayaa ka dhaadheer kuwa ka muuqda khadadka showga, si wadajir ah ayaa la isugu soo dhoweeyaa aad ayeyna u kacsan yihiin. Joogsiga ayaa ka yar qeexan marka loo eego khadadka bandhigga. Dabada ayaa si dabiici ah loogu hayaa qalooca sickle gadaashiisa marka la feejignaado. Koodhku waa dherer dhexdhexaad ah oo cufan leh jaakad kudhowaad illaa inta ka sareysa dusha sare. Midabada koofiyaddu way kala duwan yihiin loomana arko inay muhiim u yihiin noocyada. Qaar ka mid ah midabada jaakadaha caadiga ah waxaa ka mid ah caddaan saafi ah, bun, buunbuunin iyo caddaan, madow, dhuxul dhuxul, cawl, cawl bunni ah, buluug cawl ah iyo sable (casaan leh timo ilaalin oo madow leh iyo sanka madow). Raadinta Piebald iyo agouti (nooca duurjoogta) midabaynta ayaa caan ah. Qaarkood waxay leeyihiin wajiyo madow oo cad oo kaliya cagaha iyo talooyinka dabada. Indhuhu waxay noqon karaan buluug ama bunni, ama isku dar kasta oo labada ah.
Tani waa nooc firfircoon oo shaqeynaya oo noqon doona mid dabacsan oo la tababari karo marka la siiyo jimicsi ku filan. Tani waa eey tamar badan leh, gaar ahaan markuu yar yahay. Seppalas waa kuwo caqli badan oo tababaran, laakiin waxay adeeci doonaan oo keliya amar haddii ay arkaan in aadanaha uu ka maskax adag yahay naftooda. Haddii shaqaaluhu muujiyo hogaamin, ma arki doonaan ujeedada u hogaansamida. Tababar waxay qaadataa dulqaad, joogtayn iyo fahamka dabeecadda eyga Arctic. Hadaadan ahayn eeyadan 100% adag, kalsooni leh, iswaafaqsan Hogaamiyaha xirmada, wuu ka faa'iideysan doonaa, noqoshada ula kac iyo dhaqan xumo . Seppalas waxay sameeyaan heer sare saaxiibbada orod , illaa inta aysan kululayn. Noocani wuxuu jecel yahay inuu qayliyo oo uu si fudud ku caajiso. Si fiican uma shaqeynayo haddii keligaa laga tegey muddo dheer oo aan jimicsi weyn la sii samayn ka hor. Seppala cidlo ah, ama Seppala oo aan helin ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed noqon kara aad u burburin . Xusuusnow in Seppala ay tahay shaqo run ah eey sled ah qalbiga iyo nafta. Waxay ku fiican yihiin xayawaannada kale haddii iyaga laga soo koriyo eeyaha, laakiin waxay jecel yihiin inay ugaarsadaan xayawaanka ugaadha yaryar. Seppalas waa cunno cunno badan waxayna u baahan yihiin cunto ka yar intaad filan karto. Noocani wuxuu jecel yahay inuu meeraysto. Seppalas waxay u samayn kartaa saaxiibo cajaa'ib leh dadka ka warqaba waxa laga filayo xayawaanadan quruxda badan iyo kuwa caqliga badan isla markaana diyaar u ah inay waqti iyo xoog ku geliyaan iyaga.
Dhererka: 22 - 23 inji (56 - 58 cm)
Miisaanka: 40 - 50 rodol (18 - 23 kg)
U nuglaanshaha xasaasiyadda, kansarka iyo dhibaatooyinka indhaha.
sawirada eeyaha buluugga ah
Badanaa laguuguma taliyo guryo, si kastaba ha noqotee waxay ku noolaan karaan guryo haddii si fiican loo tababbaray oo si habboon loo jimicsado. Seppala Siberian Sleddogs waa kuwo aad ugu firfircoon gudaha gudaha waxayna ku fiican yihiin daarad ku wareegsan, dayr weyn. Dharka culus awgood, eeyahaani waxay doorbidaan cimilo qabow. Mid waa inuu adeegsadaa caqli wanaag marka loo eego ilaalinta kuleylka adoo siinaya hooska ku filan iyo qaboojiyaha. Noocani wuxuu doorbidaa inuu ku noolaado xirmooyin.
Seppala Siberian Sleddog waxay ubaahantahay jimicsi badan. Markaad jiidanayn sled caleenta waxay u baahan tahay ugu yaraan maalin kasta soco ama orod, laakiin waa in aan si xad dhaaf ah loogu jimcin cimilada diiran.
timaha dhaadheer ee chihuahua terrier mix
Seppala Siberian Sleddog wuxuu ahaa waqti isku mid ah kan Siberia Husky . Had iyo jeer waxay ahayd khadadka shaqada ee caarada oo waligeed looma adeegsan giraan show. Maaddaama eyda giraanta showgu u soo baxeen wax badan oo quruxdooda ah, waxyarna u jiidaya cirifka, Seppala Siberian Sleddog wuxuu ahaa eey shaqeeya oo run ah. Khadadka dhiigga ayaa laga ilaaliyay eeyaha showga. Dabayaaqadii 1990-meeyadii, tarankaas waxay u aqoonsadeen mas'uuliyiinta beeraha Kanada nooc cusub. Sanadkii 2002 khadadka Seppala Siberian Sleddog ayaa ku faafay USA maaddaama kuwa wax soosaara ay ka shaqeynayeen ilaalinta khadadka shaqada ee laga soocay khadadka bandhigga.
Seppala Siberian Sleddog eey, xushmad sawir Seppala Kennels, Rossburn, Manitoba
kala badh chihuahua nus-yar pinchercher
cabirka isku darka jiiriga chihuahua
heerka poodle st. isku dhafka bernard
eey ku dhalatay dhanxanegga dillaacii
adhijirka Jarmalka iyo isku dhafka pug